Marika hita maso amin’ny fiantraikan’ny fiovan’ny toetrandro amin’ny biby sy ny zavamaniry ao Nepal · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Desambra 2015 6:12 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Ελληνικά, Deutsch, Français, Español, Aymara, 繁體中文, 简体中文, Italiano, English
Rhododendron sy Himalayas. Sary avy amin'i Andrew Miller. Toerana Masina Annapurna, Nepal. CC BY-NC
Miverin-tsaina izao tontolo izao amin'ny fifanarahana farany nifaneken'ny firenena 195 tamin'ny Conference of Parties (COP) laharana faha-21 notontosaina tao Parisy. Nifanaraka ny mpitondra hametraka fetra amin'ny famoahana etona miteraka fihafanan'ny tany isorohana ny fiakaran'ny maripana ambonin'ny roa degre Celsius noho ny tamin'ny fotoana nisian'ny orinasa goavana betsaka, satria ahian'ny manampahaizana ho zavadoza no hitranga vokatry ny fiovan'ny toetrandro.
Avoitran'ny fifanarahana ny fanohanana ireo firenena andalam-pandrosoana sy ireo firenena tratra aoriana amin'ny fampandrosoana tahaka an'i Nepal, izay voatondro ho mandray anjara amin'ny fihafanan'ny tany amin'ny ankapobeny, saingy efa lasibatra sahady amin'ny fiantraika hita maso amin'ny fiovan'ny toetrandro.
Ao Mustang [soavaly dia no ahafantarantsika azy fa anaram-paritra eto] an'i Nepal, ny distrika Himalayana malaza amin'ny paomany no tsy nahita izany fahavokaran'ny paoma izany tao amin'ny saham-boankazon'ny Komitim-Pampandrosoana ny Tanànan'i Lete sy Kunzo izany tao anatin'ny enintaona.
Republica : Tanim-paoma ripaka ao an-tanàna kelin'i #Mustang noho ny fiovan'ny toetrandro |
Tamin'ny volana Oktobra, hita tao amin'ny distrikan'i Myagdi be tendrombohitra ireo voromaherim-paty fahita tao amin'ny lemaka atsimon'i Nepal. Araka ny filazan'ny mpahay momba ny vorona, mety nisidina nitady toetrandro mangatsiaka kokoa ireo vorona ireo mba hialàna amin'ny fiakaran'ny maripana ao amin'ny lemaka.
Vorona Tarai hita tao amin'ny faritra mando Kaski
Tahaka izany koa, sambany nahatazanana vorona karazana vano miloko mavo (Ixobrychus sinensis) tamin'ny haavo 900 metatra tao amin'ny distrikan'i Kaski be havoana ireo mpandalina momba ny vorona. Tazana 250 metatra ambonin'ny ranomasina ao amin'ny lemaka ny vorona mpifindra monina.
Mitovy amin'izany ihany, tazana vao haingana tao amin'ny Reniranon'i Phewa ao amin'ny distrikan'i Kaski ireo kilelo (karazana voron-dranomasina) miloko mainty ny lohany fahita eny an-dranomasina.
Nanomboka mamelana talohan'ny fotoanany ny rhododendrons (zavamaniry tsy mety mihintsan-dravina sady mamono mavokely na mena na fotsy) tamin'ny taondasa, nanomboka tapaky ny volana Janoary izany tao amin'ny firenena, raha isaky ny eo amin'ny tapaky ny volana Febroary eo izy ireo no maniry amin'ny ankapobeny, hoy ny gazety mpivoaka isan'andro Gorkhapatra .
Saingy na ny manasaka ny volana febroary manamarika ny androm-pirenena ho an'ny voninkazom-pirenena ao Nepal aza dia efa fiovana: mamelana tanteraka izy tamin'ny volana Febroary tao anatin'ny taona vitsivitsy, na dia mahazatra ny taloha aza ny famelanany isaky ny volana Martsa sy Aprily.
Nanambara hatrany ny fanombohan'ny lohataona ny famelanan'ny voninkazo ao amin'ny tendrombohitra, saingy ankehitriny, mamony aloha loatra izany.
Tsy lazaina intsony fa nisy ifandraisany tamin'ny fiovan'ny toetrandro ny famelanan'ny rhododendron aloha loatra ao Himalaya.
Nanaitra ireo mpahay siansa ihany koa ny fikarohan'ny Tahirim-bola manerantany ho an'ny Tontolo iainana(WWF) momba ny fifindra-monin'ny lolo Apollo sy ny pika niakatra ambony kokoa ao Himalaya noho ny fiakaran'ny maripàna.
Fantatrao ve fa karazana mpanondro ny fisian'ny fiovan'ny toetrandro ny pika? Mahafatifaty ihany koa izy ireo.
Nifindra 500 metatra ambonin'ny fonenan'izy ireo mahazatra ny lolo Apollo tazana any amin'ny 3000 metatra ambonin'ny ranomasina, raha nifindra 100 metatra avo kokoa ao amin'ny faritr'i Langtang ao Nepal ny pikas.
Nanasongadina ny fivoivoin'ireo karazana lolo Pieris tany amin'ny 2.200 metatra ihany koa ny fikarohana raha 1.800 metatra no mahazatra ary toy izany ihany koa ny fiovana amin'ny taham-pahaveloman'ny lolo.
Tahaka ny kanaria (karazan-triotrio) ao amin'ny tobim-pitrandrahana arintany ny fiantraikan'ny fikorontanan'ny toetrandro hita maso, saingy mba hiatrehana ny ankivy Indiana tsy ofisialy (jereo ny tatitry ny Global Voices), mizara hazo fandrehitra avy any an'ala ny governemanta ao Nepal, ka niteraka fahatezerana teo amin'ireo mpiaro ny tontolo iainana izany.
Any Paris ireo mpitarika manerantany mba hiresaka momba ny fiovan'ny toetrandro. Mandritra izany fotoana izany, mizara kitay fandrehitra ny governemanta ao Nepal ho vahaolana #angovo hafa.